गर्भवती महिलाले के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुदैन ? जानी राखौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»गर्भवती महिलाले के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुदैन ? जानी राखौ
By रिता घिसिंग on २८ चैत्र २०७४, बुधबार ११:०३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
सबैले ध्यान दिन पर्ने कुरा गर्भावस्थामा के गर्न हुने, के गर्न हुँदैन ? गर्भवती महिलाले के खाने ? के नखाने ? सानो हेलचक्राइँले पनि बच्चा र गर्भवती महिला दुवैको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । यस विषयमा सबैले आ आफ्नै धारणा बनाउने गर्छन् । जसले गर्दा गर्भवती महिला अन्यौलमा पर्छन । गर्भावस्थामा गर्ने व्यवहारबारे यति धेरै सल्लाह हुन्छ कि स्वयं गर्भवती नै सत्यबारे अन्योल हुन्छन् । यस्तो छ गर्भावस्थाबारे ८ भ्रम ।
डेलिभरी हुन करिब ६ हप्ता बाँकी रहँदासम्म जुनसुकै समयमा पनि हवाई यात्रा गर्न सकिन्छ । हवाई यात्राले शिशुलाई कुनै असर हुँदैन ।
गर्भावस्थाका वेला कम मात्रामा कफी पिउँदा भने शिशुलाई कुनै हानि पु¥याउँदैन । तर, दिनमा तीन कपभन्दा बढी कफी पिउँदा भने हानिकारक हुन सक्छ । यदि गर्भवती आमामा कफिनको मात्रा बढी भएमा जन्मिने शिशुको तौल कम हुन सक्छ ।